“Dallada SSE waxay u hambalyaynaysaa Jaaliyada Somaliland ee magaalada Sheffield (UK) hawsha mudnaanta leh ee ay u qabteen dalkooda iyo dadkooda” - Warsaxaafadeed - Somaliland Post
Home News “Dallada SSE waxay u hambalyaynaysaa Jaaliyada Somaliland ee magaalada Sheffield (UK) hawsha...
“Dallada SSE waxay u hambalyaynaysaa Jaaliyada Somaliland ee magaalada Sheffield (UK) hawsha mudnaanta leh ee ay u qabteen dalkooda iyo dadkooda” – Warsaxaafadeed
London (SLpost)- Daladda ay ku midoobeen Ururrada Jaaliyadaha Somaliland ee Qaaradda Yurub (Somaliland Society Europe), ayaa ku hambayeysay jaaliyadda Somaliland ee magaalada Sheffield dedaalka ay u galeen hawl-galka ay kaga midho-dhaliyeen go’aanka ka soo baxay golaha deegaanka magaaladaas ee lagu taageeray Aqoonsiga Madax-bannaanida Somaliland.
War-saxaafadeed ay ku saxeexan yihiin guddiga Dalladdan SSE oo lagu taageerayo go’aankaas, ayaa isaga oo dhammaystiran u dhignaa sidan:-
“Golaha deegaanka ee magaalada Sheffield ayaa fadhi ay isugu yimaadeen si guud isugu raacay isla markaana u go’aansadey inay Somaliland u aqoonsadeen dal ahaan. Arrinkan Dallada SSE waxay u aragtaa guul u soo hoyotay Somaliland, maadaama mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn UK ay aqoonsadeen jiritaanka dalka Somaliland.
Ugu horreyn bogaadin iyo hambalyo ayaanu u soo gudbinaynaa dhammaan dadka reer Somaliland haddii ay yihiin qurbo jooga iyo haddii ay yihiin dal joogaba. Si gaara ayaanu ugu hambalyaynaa jaaliyada reer Somaliland ee Sheffield iyo mas’uuliyiinta jaaliyadooda oo dedaal iyo hawl laxaad leh arrinkan u galay. Jaaliyada Sheffield waxay muujiyeen karti, waxaanay ku talaabsadeen hawl iyo waajibaad ku dayasho mudan isla markaana waxay markhaati ka tahay tixgelinta iyo miisaanka ay ku leeyihiin magaalada Sheffield ee ay deganyihiin.
Sidoo kale waxaanu u hambalyaynaa isla markaana u mahadnaqaynaa dhammaan mas’uuliyiinta xukuumadda Somaliland ee ka soo qayb galay munaasabada Golaha Deegaanka ee Magaalada Sheffield ay ku aqoonsanayeen dalka Somaliland oo ay ka mid ahaayeen Wasiirka Arrimaha Dibedda Maxamed Biixi Yoonis, Wasiirka Macdanta iyo Tamarta Eng. Xuseen Cabdi Ducaale, Wakiilka Somaliland u fadhiya dalka UK Cali Adan Cawaale iyo mas’uuliyiinta kaleba. Waxa kale oo aanu u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii qurbo jooga ahaa ee soo buuxiyay guriga magaalada looga taliyo gudihiisa iyo dibadiisaba. Waxay aheyd munaasabad taariikhiya oo aynu rajaynayno inay magaalooyin kalena ay ku deydaan haddii ay tahay dalka UK iyo haddii ay tahay adduunka kaleba.
Waxa isweydiin mudan khibrada iyo casharada laga baran karo arrinkan.Waxaynu ognahay in qurbo jooga Somaliland ay sidoo kale awood iyo deganaansho ku leeyihiin magaalooyin kale oo dalka UK Yurubta kaleba. Waxa la soo gaadhay wakhtigii jaaliyadaha reer Somaliland ee UK ama waddamada kale ee Yurub ay xidhiidh iyo wada shaqeyn ka yeelan lahaayeen sidii loo fulin lahaa khibrada iyo waayo aragnimada ka soo baxdey magaalada Sheffield.
Markale ayaanu u hambalyaynaa jaaliyada Somaliland ee Sheffield, waxaanaanu leenahay dedaalkiina halkaa ka sii wada, waana la idiin ogsoonyahay hawsha wacan ee aad dadkiina iyo dalkiinaba u qabateen. Dallada SSE waxay rajaynaysaa in arrinka Sheffield uu inoo noqdo mid ay ka dhashaan dedaalo hor leh oo ay wada shaqeyn iyo wada xidhiidh dheeri ah ka dhex abuura jaaliydaha Somaliland ee qurbaha, wakiilada dibeda ee Somaliland iyo hay’adaha dowliga ah ee arrinkani khuseeyo.